सलमान खान संग ‘मैने प्यार किया’ फ्लिम खेलेर चर्चामा आएकी ‘भाग्यश्री’ अझै पनि देखिन्छिन जवान, स्विमिंगपुलमा खिचिएको तस्वीरहरु सोशल मिडियामा भयो भाइरल – Sunaulo Nepal TV
सलमान खान संग ‘मैने प्यार किया’ फ्लिम खेलेर चर्चामा आएकी ‘भाग्यश्री’ अझै पनि देखिन्छिन जवान, स्विमिंगपुलमा खिचिएको तस्वीरहरु सोशल मिडियामा भयो भाइरल
काठमाडौँ । आजकल बलिउड अभिनेत्री भाग्यश्री को तस्वीरहरु सोशल मिडिया मा धेरै भाइरल बनिरहेको छ। ५२ वर्षीया भाग्यश्रीले भर्खरै आफ्नो इन्स्टाग्राममा केहि तस्वीरहरु पोस्ट गरेकी छिन्, जुन देखेपछि उनका प्रशंसकहरु विश्वास गर्न असमर्थ छन् कि यो भाग्यश्री हो। उनले बिकनी लगाएर एक रिसोर्टमा पौडी खेल्दा तस्बिर पोस्ट गरे, जुन देखे पछि यो भाग्यश्री हो भनेर विश्वास गर्न गाह्रो छ।
भाग्यश्री आजकल फिल्ममा देखिन सक्छिन्, तर उनी प्राय आफ्ना अनुयायीहरु संग सोशल मिडिया मा कुरा गर्छिन् र त्यहाँ धेरै सक्रिय छिन्। उनले आफ्नो फिटनेस यति हदसम्म कायम राखेकी छिन् कि उनी भाग्यश्री हुन् भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो छ। बैजनी बिकिनी लगाएर, भाग्यश्री कहिले पानीमा रमाईलो गरीरहेकी छिन् र कहिले उनी आफ्नो साथीहरु संग पानी बाहिर पोज दिईरहेकी छिन्।
यो तस्वीर पोस्ट गर्दै, उनले क्याप्सनमा ब्रुस को बिन्ती गर्दै लेखे, “पानी जस्तै बन्नुहोस्! प्रवाह, परिवर्तन र परिवर्तन स्वीकार गर्नुहोस्। यस्तो देखिन्छ कि भाग्यश्री हाल छुट्टी मा छ र उनी आफ्ना साथीहरु संग धेरै रमाईलो गरीरहेकी छिन्। उनले आफ्नो इन्स्टाग्राममा आफ्ना साथीहरु संग धेरै धेरै तस्वीरहरु पोस्ट गरे, यो देखेर कि उनी धेरै खुसी छन्।
जतिसक्दो चाँडो तपाइँ तस्बिरहरु राख्नुहुन्छ, लाईक र कमेन्ट यसमा आउन थाल्छ। भाग्यश्रीले बलिउडमा डेब्यू गरे सलमान खानको मैने प्यार किया बाट। उनीहरुले खेलेको सुमनको चरित्रलाई जनताले धेरै माया गरे। लामो समय सम्म फिल्महरु बाट टाढा रहे पछि भाग्यश्री कंगना रनौत को नयाँ फिल्म थलाइवी मा र प्रभास को आगामी फिल्म राधेश्याम मा पनि देखिनेछिन्।
Previous जब १५ वर्षकै उमेरमा करीना प्रेममा परिन्, ढोका थुनेर आमाले राख्दा पनि यसरी जान्थिन् भेट्न
Next ७ दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ?? ॐ लेखि सेयर गरौं